Xinhua Myanmar - အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပန်ဒါကြီးမျိုး သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပန်ဒါကြီးမျိုး သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် သက်တမ်းတိုး
တရုတ် အမေရိကန် ပန်ဒါကြီးမျိုး
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ Smithsonian ၏ အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ပန်ဒါကြီးမျိုးဖြစ်သော မေရှန်း (ဝဲ) နှင့် ထျန်းထျန်းတို့အား ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Courtesy of Smithsonian's National Zoo) North America
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
အမေရိကန်နိုင်ငံ Smithsonian ၏ အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ တောရိုင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့် ပန်ဒါကြီးမျိုး သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို သက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ပန်ဒါအမ မေရှန်း၊ ပန်ဒါအထီး ထျန်းထျန်းနှင့် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ၎င်းတို့၏ သားပေါက်လေး ရှောင်ချီကျိတို့အား ဝါရှင်တန်မြို့တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်အထိ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် သုံးနှစ် သက်တမ်းတိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူ ပန်ဒါကြီးမျိုးကို လေ့လာရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကာလရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာ ရာစုနှစ်ဝက် ဖြတ်သန်းနိုင်တော့မှာပါ” ဟု Smithsonian အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ဇီဝဗေဒ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ John and Adrienne Mars ညွှန်ကြားရေးမှူး Steve Monfort က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“အမေရိကန်ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာနဲ့အတူ လာမယ့်သုံးနှစ်အထိ ရှောင်ချီကျိလေးကြီးပြင်းလာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်ဒါကြီးမျိုးတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ နားလည်ဖို့အတွက် တိုးတက်မှုတွေ ပိုမိုရရှိဖို့ ကျွန်တော်လည်း စောင့်ကြည့်နေပါတယ်” ဟု Monfort က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
Smithsonian အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ “နိုင်ငံ့ရတနာ” အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရမှ လက်ဆောင်အဖြစ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ပန်ဒါကြီးများတစ်စုံကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၏ ဒုတိယမြောက် ပန်ဒါကြီးစုံတွဲဖြစ်သော မေရှန်းနှင့် ထျန်းထျန်းတို့သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်ကတည်းက ၎င်းနေရာတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိပြီး မေရှန်းသည် သားပေါက်လေးကောင်ကို အသက်ရှင်လျက်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ရှောင်ချီကျိကို မွေးဖွားခြင်းဖြင့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော မေရှန်းသည် မြောက်အမေရိကတွင် သားဖောက်သော အသက်အကြီးဆုံးပန်ဒါဖြစ်လာခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နာမည်ကျော် အမေရိကန် ပြတိုက်နှင့် သုတေသနနေရာဖြစ်သော Smithsonian အဖွဲ့၏ အမျိုးသားတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် အများပြည်သူလာရောက်လည်ပတ်ရန် ယာယီပိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China, #U.S, #GiantPanda, #Research, #Xinhua, #တရုတ်, #အမေရိကန်, #ပန်ဒါကြီးမျိုး, #သုတေသန, #ဆင်ဟွာ
The three-year extension allows female giant panda Mei Xiang, male giant panda Tian Tian, and their cub Xiao Qi Ji, born at the National Zoo earlier this year, to continue to live in Washington, D.C. until Dec. 7, 2023.
"Our long-standing collaboration with Chinese colleagues to study, care for and save the giant panda will now pass the half-century mark," Steve Monfort, John and Adrienne Mars Director of the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, said inastatement.
"Along with millions of Americans, I look forward to the next three years, watching Xiao Qi Ji grow and making further strides in conservation and in our understanding of giant pandas," Monfort added.
The National Zoo received its first pair of giant pandas, dubbed as China's "national treasure," in 1972 asagift from the Chinese government.
Mei Xiang and Tian Tian, the National Zoo's second pair of giant pandas, have lived there since Dec. 6, 2000, during which the female has given birth to four surviving cubs, all sired by the male.
With the birth of Xiao Qi Ji on Aug. 21, Mei Xiang, 22, became the oldest giant panda to give birth in North America.
Due to the COVID-19 pandemic, the National Zoo, part of the Smithsonian Institution,arenowned U.S. museum and research complex, is temporarily closed to the public. Enditem
1-Photo posted on Dec.7, 2020 shows giant pandas, Mei Xiang (L) and Tian Tian, at Smithsonian's National Zoo in Washington, D.C., the United States. (Courtesy of Smithsonian's National Zoo)
2-(201124) -- BEIJING, Nov. 24, 2020 (Xinhua) -- Undated photo taken in November 2020 shows the giant panda cub "Xiao Qi Ji" at Smithsonian's National Zoo in Washington, D.C., the United States. "Xiao Qi Ji," which translates into English as "little miracle," is the name given to the giant panda cub born three months ago in Washington, D.C., the zoo where he was born announced Monday. (Smithsonian's National Zoo/Handout via Xinhua)
Previous Article ဘိုင်ဒန်က အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအော်စတင်းအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အမည်စာရင်းထုတ်ဖော်ကြေညာ
Next Article အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် က ဆိုမာလီယာ မှ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင် အများစုအား ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် အမိန့်ချမှတ်